२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार ०६:५८:००
बृहत् नागरिक आन्दोलन र बालाजु बाइपास सडक विस्तार संघर्ष समितिका अभियन्ताले सोमबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना र वसन्तपुरको जुद्धसडकअघि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । गत बुधबार आठजना अभियन्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइएपछि आन्दोलित बनेका उनीहरूले रिहाइको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका हुन् । प्रहरीले अभियन्ताहरूलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको छ ।
प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै अभियन्तालाई मुद्दा चलाएपछि आक्रोशित उनीहरूले ‘माथिको आदेश मान्दैनौँ’ ‘मातृभाषालाई सम्मान गर’, ‘अदालतको आदेश पालना गर’लगायत नारा लगाएका थिए । गत बुधबार सुमन सायमी र विरोचन श्रेष्ठलाई नेवारी भाषा बोलेकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । ०७३ सालमै सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशलाई अवज्ञा गर्दै फेरि डोजर चलाइएपछि उनीहरू सडकमा आएका हुन् । सडक विस्तारको नाममा आदिवासीलाई उठिवास गराइएकाले आफूहरू सडकमा आएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाउन लागेको सूचना केन्द्रस्थल पुगेर जस्ताको बार भत्काएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्रउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । आफूहरूलाई आफ्नै भूमिबाट विस्थापन गरेर महानगरले सार्वजनिक शौचालय बनाउन लागेको भन्दै विरोध गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । अभियन्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राज्यले हामी आदिवासीलाई गैरन्यायिक हिसाबमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनु कत्तिको जायज छ ? के हामी लोकतन्त्रका खातिर सडकमा यही देख्न गएका थियौँ ? शासकले यहाँका आदिवासीमाथि जुन खालको निन्दनीय कदम चालिरहेको छ, यसको मूल्य जरुर चुकाउनुपर्नेछ ।’
बालाजु बाइपास सडक विस्तार संघर्ष समितिका अभियन्ताहरू वर्षौंदेखि सडकमा छन् । आधा दशकभन्दा लामो समयदेखि बस्दै आएका उनीहरूका घरमा राज्यले विनासूचना सुरक्षाकर्मीको सहायतामा घर भत्काइएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका थिए । स्थानीय पीडित रोशन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राज्यले हाम्रो घर मात्रै भत्काएन । हाम्रो भाषा, पहिचान, सभ्यतामाथि पनि डोजर चलाइदियो । यसको हिसाब जरुर गर्नेछौँ ।’ आफूहरू अन्तिम साससम्म पनि लडिरहने र न्याय पाइछाड्ने उनको भनाइ छ ।
कीर्तिपुरमा बृहत् नागरिक आन्दोलनको मार्च (फोटोफिचर)
नागरिक आन्दोलनका चुनौती